Ipaki yanamhlanje, iibhentshi zedolophu kunye nezitiya zegadi esuka kwi-DODI YESITHILI
Ipaki, isixeko kunye neebhentshi zegadi
Iibhentshi zeepaki zizinto ezingabalulekanga uyilo lweedolophu ezincinci. Ukusuka kwimbonakalo yemisebenzi yokusetyenziswa, zisetyenziselwa ukuhlala, kodwa kuthathelwa ingqalelo ucwangciso lomhlaba, ziyifenitshala yasezidolophini. Iipaki, isikwere, iigadi, izitrato kunye neendawo zokuma zesixeko zinikezwe iibhentshi.
View ikhathalogu yemveliso ekwi-intanethi >> okanye Ukukhuphela iikhathalogu >>
Kwindlela ebanzi, iibhentshi zezona zinto zisetyenziswa kakhulu kuyilo oluncinci kungekuphela nje kwiipaki nasegadini. Kananjalo sinokufumana iibhentshi ezinkundleni, phambi kwamabala emidlalo, kwiminyhadala yesikolo, ezicaweni, kumangcwaba nakwezinye iindawo ezininzi.
Iibhentshi zedolophu ziyindawo yokuhambisa imilenze ediniwe kukuhamba ixesha elide, kunye nethuba lokuma umzuzwana, onokuba sisihlandlo sokuvuma kothando. Ngaphantsi kokuthetha isihobe, iibhentshi zedolophu yeyona ndawo ibaluleke kakhulu yegadi kunye nefanitshala yeepaki, ngaphandle kwayo kunzima ukucinga ukuba imeko yendawo yokudlala, indawo engaphakathi yegadi yesixeko, indawo yephuli yasemva kwendlu okanye nayiphi na enye indawo yoluntu.
Sisebenzisa iibhentshi zeepaki ngokuhlala elangeni kwigadi yeentyatyambo, sonwabele incoko kunye nomhlobo epakini, sifunda incwadi ngasechibini okanye sibukele umntwana esonwabela umtsalane kwindawo yokudlala. Ukuba bezingekho iibhentshi zepaki, indawo yesixeko ibiya kuba yintlupheko kwaye ingasebenzi kancinci.
Jonga imizekelo yokwaziwa kwe-METALCO
Iibhentshi zeepaki zeSixeko
Zininzi iindidi zeebhentshi zedolophu. Iindidi zabo zinokwahlulwa ngenxa yendawo abaya kuyo, ukwakhiwa, izixhobo ezisetyenziselwa ukwakhiwa kwazo, kunye nesitayile kunye noyilo.
Ngenxa yelungiselelo okanye injongo, siyakwazi ukwahlula iibhentshi zesitrato, idla ngokubizwa iibhentshi zedolophu, Iibhentshi zeepaki yaye iibhentshi zegadi.
Ngenxa yokwakhiwa, oko kukuthi, isakhiwo, sime ngaphandle iibhentshi ngaphandle kwe-backrest okanye iibhentshi nge backrest. Iibhentshi emi kwimilenze emine okanye ngaphezulu, kwaye nazo zixhunyiwe ngokusisigxina phantsi ngomhlaba wonke.
Ngenxa yohlobo lolwakhiwo kunye nezinto zokugqiba, iibhentshi zeepaki zahlulwe zangqinwa iibhendi zesinyithi, iibhentshi zensimbi - iibhentshi ezenziwe ngeentsimbi zentsimbi, iibhentshi zekhonkrithiiibhentshi ezenziwe ngekhonkrithi. iibhentshi zamatye okanye iibhentshi zeplastiki.
Ngenxa yesitayile kunye noyilo, sinakohlulahlula iintlobo ngeentlobo zebhentshi yepaki. Ukwahlula okulula kubandakanya iibhentshi zangoku kunye neebhentshi zemveli, zihlala zimodareyithwe kwisitayile sexesha elinikiweyo okanye zilungelelaniswe nezakhiwo ezijikelezileyo nezinye izinto uyilo lweedolophu ezincinci.
Iibhentshi eziphambili zeepaki
Yintoni ekufuneka uyiqwalasele xa ukhetha ibhentshi yepaki? Zininzi iikhrayitheriya. Apha ngezantsi sibonisa okona kubalulekileyo kubo.
Iibhentshi zeepaki ezingabizi? Ixabiso
Njengalo naluphi na uhlobo lokuthenga okanye ukutyala, ixabiso lemveliso lihlala liyenye yeendlela zokukhetha. Kule meko, amaxabiso amabhentshi epaki axhomekeke ikakhulu kwizinto ezenziwe ibhentshi, kunye nobungakanani bayo. Iibhentshi zeepaki zexabiso eliphantsi zihlala zizakhiwo zebhentshi yensimbi. Ezona zincinci ziya kuba yexabiso eliphantsi. Ngaphezulu kwebhentshi, izinto ezingaphezulu zisetyenziselwa ukuyivelisa, ngoko ke ixabiso liyenyuka.
Iibhentshi zedolophu ezikhuselekileyo
Ngaphezu kwako konke, ibhentshi kufuneka ikhuseleke kubantu abadala kunye nakubantwana. Isakhiwo saso kufuneka sithembeke kwaye sihlala siqinile ukuze ukhuseleko lokusebenzisa le fenitshala yesitrato lunganciphi ngokusetyenziswa kwayo.
Nangona ungekho umgangatho osemthethweni wasePoland onokusebenza ngokuthe ngqo kwiibhentshi zeepaki, kukho iimfuno ezifanayo ezinokusetyenziswa xa uyila naxa usenza iibhentshi zeepaki. Umgangatho we-PN-EN 1176 wesixhobo sokudlala kwindawo yesiqhelo usetyenziswa kakhulu.
Ukuqina kweebhentshi zeepaki
Ifenitshala eshiywe kwindawo kawonkewonke ichaphazeleka kukonakaliswa. Ke ngoko, iibhentshi zeepaki zihlala zinenkqubo yokulwa nokonakaliswa. Kukukwandiswa kwebhentshi okumbiwe emhlabeni, okuthintela ibhentshi ukuba ingashukumi, ibiwe okanye nayiphi na enye indlela yokuphanziswa.
Ibhentshi enomgqomo wenkunkuma
Imgqomo yenkunkuma ihlala iyinto engenakuthelekiswa nanto yeebhentshi zepaki. Inokudityaniswa kunye nebhentshi njengento yayo. Inokuba yinto eyahlukileyo yoyilo encinci, kodwa emva koko kufuneka ikhethwe ngononophelo kwaye ngokungabonakaliyo iyahambelana noyilo lwebhentshi.
Iibhentshi zeepaki zinokuxhotyiswa ngeetafile, iirejimeni kunye nezinye izinto ezininzi. Babonelela ngendawo yemithwalo, isikhwama okanye ibhegi yomva. Bayakuvumela ukuba uphumle incwadi kamnandi, ubeke izinto okanye utye isidlo kwiimeko ezifanayo nezo zevenkile yokutyela. Kwiipaki, iibhentshi ngamanye amaxesha zihamba kunye neetafile eziyindawo yokudlala chess, iitsheki okanye eminye imidlalo. Iibhentshi zinokubakho okuhlanganisiweyo kokukhanya kwesibane. Banokuba yinxalenye yeharbor, umthombo, isikrweqe okanye ibhedi yeentyatyambo. Namhlanje kuphela ingcinga yokunciphisa umyili!
Beka iibhentshi zepaki yesinyithi
I-alloy yekhabhoni kunye nentsimbi yintsimbi. Igqalwa njengesixhobo sokwakha esomeleleyo nesisetyenziselwa ukuvelisa iibhentshi zedolophu. Iiracks ze-iron iron zinokuthatha iindlela ezininzi kunye neemilo. Banokuhlobisa okumnandi kunye nokufakwa umlenze ngokungaqhelekanga. Iibhentshi ezilungiselelwe ezinjalo ziya kusebenza phantse naphina, kuba unokwenza ngokukhululekileyo imbonakalo yazo. Ibhentshi yesinyithi yentsimbi yifenitshala yedolophu eya kusebenza kakuhle kwipaki, kwigadi nakwisikwere.
Iibhentshi zepaki yentsimbi, emva kokuyilwa kwesakhiwo, ziyimpuphu edityanisiweyo, ngenxa yoko isakhelo siyathandeka ekuchukumiseni, kwaye umphezulu wayo ugudile kwaye umelana nokugqwala.
Enye inzuzo yokubeka iibhentshi zepaki yensimbi bubunzima babo. Iibhentshi zeepaki ezinjalo zinzima kangangokuba zihlala zizinzile nkqu nangaphandle kwesidingo sokuzinamathisela emhlabeni. Abantwana abaxhuma kwi-backrest abayi kulula ukubhukuqa isakhiwo esinzima kangako, kwaye nezidlwengu zinokwala ukwenza ububi.
Iibhentshi zepaki yokhuni
Iibhentshi ezenziwe ngokupheleleyo ngokhuni zibonakala zinomtsalane kakhulu. Le bhloko yokwakha yendalo ibanikeza isimilo kunye nobungangamsha. Ngelishwa, njengoko kunjalo kwiinkuni, zifuna ukulungiswa ngezikhathi ezithile. Kufuneka zipeyintiwe kwaye zihlaziywe rhoqo. Khathalela ukhuseleko kwiimeko zemozulu ezingalunganga.
Iibhentshi zeepaki zeenkuni akufuneki zibekwe ngqo emhlabeni, isanti okanye ingca. Akufanelanga ukuba zidibane nomhlaba osisigxina okanye umhlaba omanzi rhoqo. Zilungele iindawo ezinophahla kunye nezo zinobunzima obomileyo kunye namanzi.
Iibhentshi zepaki yesinyithi
I-Universal, iibhentshi zedolophu yanamhlanje? Okanye ngaba ibhentshi yegadi yabucala? Kwisitayile? Iibhentshi zensimbi ziza kuhlangula. Iialloys zensimbi ezahlukeneyo zisetyenziselwa izakhelo zazo, ezona zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala ixesha elide kwaye zilula. Umzekelo wolu hlobo lwezinto zokwakha ziyialuminiyam.
Iibhentshi zetsimbi zinoyilo lwala maxesha. Enye yeengenelo zabo isisindo esisezantsi. Iibhentshi ezinjalo zilungele ngakumbi ukusuka kwindawo ukuya kwenye. Banokusebenza kakuhle njengesihlalo sababukeli bokusebenza bangaphandle okanye ifenitshala yegadi eya kutshintsha isikhundla sayo rhoqo, o.k.t. kuxhomekeke kwixesha.
Iibhentshi zekhonkrithi kunye nezamatye
Ipaki okanye ibhentshi yesixeko akufuneki ibe neebhodi, i-backrest yesiko kunye nemilenze. Ingaba yikhonkrithi ebunjiweyo, eyenziwe ngokukhululekileyo okanye eqingqiweyo elityeni. Ezi ntlobo zeebhentshi zinzima, akufuneki zilungiswe kwaye ziphantse zingabinakho. Banokuba yinxalenye yezitebhisi, umthombo okanye ibhedi yeentyatyambo. Baxuba ngokugqibeleleyo kunye nezinye izinto zokwakha kancinci.
Izisombululo ezithandwayo zikwabandakanya ukudibanisa izinto ezininzi. Ibhentshi ene backrest eyenziwe ngomthi kunye nesihlalo inokuba nemilenze yekhonkrithi enkulu. Konke kuxhomekeke kulindelwe ngumtyali mali kunye nengcinga yomyili.
4.9 / 5 ( 31 iivoti )
Ibhentshi yegadiiibhentshi zekhonkrithiiibhentshi zomthiIibhentshi zeSixekoIibhentshi zegadiIibhentshi zeepakiiibhentshi zepaki ekhonkrithiIibhentshi zeepaki ngaphandle kwe-backrestiibhentshi zeepaki zexabisoUluhlu lwamaxabiso ebhentshi epakiniiibhentshi zeepaki zokhuniiibhentshi zepaki yesinyithiiibhentshi zeepaki zedolophuiibhentshi zepaki zangokuIiphentshi zomenzi wepakiIbhentshi yepaki yensimbiiibhentshi zensimbiPhosa iibhentshi zensimbiiibhentshi zeepaki zedolophuiibhentshi zepaki zangokuiibhentshi ezingabiziIibhentshi zexabiso eliphantsi
Indawo yokudlala yeMetalco
Indawo yokudlala yanamhlanje ivumela ukonwaba okungathintelwanga kunye nokukhuselekileyo kwimoya evulekileyo hayi yabantwana bayo yonke iminyaka, kodwa nabantu abancinci. ...
17 Meyi 2020
Okwangoku, ifanitshala yasesitalatweni ikwabandakanya nesigqubuthelo somthi. Ezi zinto zisebenzayo kunye nobuhle zingenziwa ngeendlela ezahlukeneyo. ...
12 Meyi 2020
Inkqubo yokulawula amagumbi okubulala iintsholongwane kusetyenziswa indlela yenkungu eyomileyo
Iinkqubo zokuchacha ezisetyenziswa kwinkqubo yenkungu eyomileyo yenkunkuma inokusetyenziswa kwiindawo ezahlukeneyo. Ngoku ukuba ...
6 Meyi 2020
Entsha kunikezo! Izikhululo zokulahla intsholongwane-ucoceko lwezandla ezivela kwi-METALCO
Izikhululo zokulahla intsholongwane / izikhululo zococeko zezandla yinto entsha ekunikezelweni kwethu njengenxalenye yoyilo oluncinci. Isisombululo esenza lula ...
Uyilo oluncinci luyilwe zizinto ezincinci zokwakha ezidityaniswe kwindawo yesixeko okanye zibekwe kwipropathi yabucala ...
31 Matshi 2020
Igumbi labacebisi beRiphabhlikhi yasePoland
Kuyinyani ukuba umsebenzi womyili wezakhiwo ngumsebenzi wasimahla onokuzisa ulwaneliseko kunye nezibonelelo ezibonakalayo, kodwa indlela yokuqalisa ukusebenza ...
© 2020 UMBUTHO WESIXEKO SESIXEKO |Umgaqo Wemfihlo
Idatha yakho yobuqu iya kusetyenziselwa ukwenza iodolo yakho, ukuphatha utyelelo lwakho kwiwebhusayithi yethu kunye nezinye iinjongo njengoko kuchaziwe kuthi Umgaqo-nkqubo wobumfihlo .
Ndiyifundile kwaye ndiyayamkela imigaqo yewebhusayithi